Chaung Thar -
All posts tagged "Chaung Thar"
Jovago | June 22, 2017
ချောင်းသာကမ်းခြေဟာ ပုသိမ်မြို့ ၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာတည်ရှိပါတယ်။ ရန်ကုန်ကနေ သွားမယ်ဆိုရင် ငါးနာရီလောက်ပဲ ကားမောင်းရပါတယ်။ မိုးရာသီဆိုပေမယ့် ချောင်းသာကတော့ ခရီးသွားတွေများနေဆဲပါ။ များသောအားဖြင့် ခရီးသွားတွေက အစားသောက်တွေကို ဒေသခံတွေဆီကပဲ အော်ဒါမှာယူလေ့ရှိတာမို့ စားသောက်ဆိုင်တွေဆီသိပ်သွားလို့မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် အစားသောက်ချစ်သူတွေအတွက်...
Places to Eat in Chaung Thar Beach
Chaung Thar Beach is located at Pathein city of Ayeyarwady region. It is atadriving distance of...
Jovago | April 27, 2017
ပုသိမ်မြို့အကြောင်း ပုသိမ်မြို့ဟာ ရန်ကုန်မြို့အနောက်ဘက်မိုင် ၁၀၀ ကျော်အကွာဝေး ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းမှာတည်ရှိပါတယ်။ ရခိုင်ရိုးမ၊ ပင်လယ်ကမ်းရိုး တန်းနဲ့ အနောက်ဘက်မှာ ဧရာဝတီမြစ်လက်တက်တို့က မြို့ကို ၀န်းရံထားပါသေးတယ်။ ပုသိမ်ဟာ ချောင်းသာ၊ငွေဆောင်တို့လို လှပတဲ့...
Gorgeous beaches in Pathein city
Pathein city is located in Ayeyarwady division and over 100 miles away west of Yangon. The city is...
Jovago | April 10, 2017
Thingyan ( Water Festival)
Thingyan (Burmese term) Festival isaMyanmar New Year festival. And it usually takes place on April every...
Jovago | April 6, 2017
City in World Famous essays
About Mawlamyine Mawlamyine is the capital city of Mon state in Myanmar. It is located south-east of Yangon...
Jovago | March 23, 2017
Top 10 things to bring with you to the beach
Summer is the best time to go to the beach. IF you are planning to travel to Chaung...